Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wafdigii uu Hogaaminaayay oo si diiran loogu soo dhaweyay magaalada London | Salaan Media
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wafdigii uu Hogaaminaayay oo si diiran loogu soo dhaweyay magaalada London
Wafdigii uu Hogaaminaayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay galab ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ayaa gaaray maanta magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah Ra’isul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibeda Fowsiyo Yuusuf Xaaji, wasiiru dawlahaa madaxtooyada Faarax C/qaadir, wasiirka maaliyada iyo qorsheynta Maxamuud Xasan Suleymaan iyo madax kale oo ka tirsan labada golle ee Xukuumadda.
Maadaxweynaha iyo Wafdigiisa markii ay ka degeen garoonka dayuuradaha Heathrow ee magaalada London ayaa waxaaa ku soo dhoweeyey halkaas masuuliyin ka tirsan dowlada Britain iyo xubno ka tirsan jaaliyadaha Soomaaliyed ee ku dhaqan dalkaasi oo watay sawirada Madaxweynaha.
Wafdiga madaxweynaha ayaa waxay wadahadalo kula leeyihiin magaalada London mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Ingiriiska, iyagoo ka wada hadlaya qaabka uu qabsoomayo shirka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee maalinta beri ah halkaas ka furmi doona.
Dhinaca kale magaalada London waxaa ku qulqulaya wafuud fara badan kuwaasi oo ka qeybgalaaya shirkaas, kuwasoo ka mid ah dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya iyo Wadamo dhowr ah oo ka tirsan Qaarada Afrika.